1. Gịnị bụ Linaclotide (Linzess)?
2. Gịnị ka eji Linaclotide mee?
3. Gịnị bụ usoro ọrụ nke Linaclotide?
4. Kedu ka a ga-esi jiri Linaclotide?
5. Gịnị bụ usoro ọgwụ Linaclotide (Linzess)?
6. Olee nsogbu Linaclotide nwere ike ịkpata?
7. Kedu ọgwụ ma ọ bụ mmeju ga-emekorita ya na Linaclotide?
8. Kedu ihe dị iche na Linaclotide na lubiprostone?
9. Ihe omuma ndi ozo banyere Linaclotide ka m kwesiri ima?
Linaclotide (Linzess) bụ ọgwụ a kwadoro nke FDA na-ejikarị eme ihe nke ndị okenye toro eto na-enwe afọ ntachi ma ọ bụ afọ ntachi na-adịghị ala ala n'ihi ọrịa bowel syndrome. Linaclotide 851199-59-2 na-abịa n'elu ndepụta nke klaasị ọgwụ ọhụụ akpọrọ guanylate cyclase-C agonists.
Aha ohuru Linaclotide bu Linzess ma odi nkpa n’uche n’obodo a na enweghi udiri usoro Linaclotide. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ Linaclotide maka ọrịre ma ọ bụ jiri aka gị, nọrọ na nche maka ndị na-ere ọgwụ ọjọọ na ịntanetị ndị nwere ike na-ere iwu na-akwadoghị Ihe omumu Linaclotide ọgwụ.
Linzess bụ onye agonist guanylate cyclase-C yana peptide 14-amino acid. Ọ bụ kemịkal aha ya bụ L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonyl-glycyl- L-cysteinyl-L-tyrosine, cyclic (1-6), (2-10), (5-13) -tris (disulfide).
Ngwakọta molekul ya bu C59H79N15O21S6 mgbe molekuliki di 1526.
Linaclotide ntụ ntụ na-acha ọcha ka ọ na-acha ọcha ma nwee ntakịrị mmiri. O nwekwara ike igbari obere ntakịrị na sodium chloride (0.9%).
Ikpeazu Linzess dị n'ụdị capsules gelatin siri ike nke nwere afụ ọnụ Linaclotide. Calcium chloride dihydrate, L-leucine, titanium dioxide, microcrystalline cellulose, gelatin, yana hypromellose bụ otu n'ime ihe ndị na-arụ ọrụ na Linzess
N'ihe banyere ojiji Linaclotide, ndị mmadụ na-eji ya dịka ọgwụgwọ maka nsogbu ụfọdụ gbasara eriri afọ dịka ọrịa obi na-egbu egbu nke na-egosi afọ ntachi na afọ ntachi na-adịghị ala ala.
Linaclotide maka akpọnwụ bowel ọrịa ihe mgbaàmà
Irighiri bowel syndrome (IBS) bụ nsogbu na-adịgide adịgide nke na-egbochi eriri afọ ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma. A na-akpọkwa ihe ngosipụta nke Linaclotide dị ka ọrịa spastic na ọrịa bowel na-arụ ọrụ mgbe ụfọdụ. Ihe mgbaàmà kachasị nke nsogbu ahụ bụ afọ ntachi, afọ ọsịsa na mgbu afọ na afọ ntachi ma ọ bụ na-aghọrọ ọnya afọ.
N'ime nnyocha ọmụmụ ahụike iji gosipụta nrụpụta ọrụ nke Linaclotide maka enyemaka nke mgbaàmà ọrịa obi na-afụ ụfụ, a na-eji ndị okenye toro eto na-esonye n'ọtụtụ ọnwụnwa abụọ. Ikpe nke mbụ metụtara ndị ọrịa 800 bụ ndị e tinyere na ọgwụgwọ 290 mcg kwa ụbọchị mgbe e kenyere 804 na nke abụọ nke nọ na placebo.
Ndị ọrịa niile ejirila otu abụọ ahụ ezutela IBS Rome II ma na-atụ anya ka ha nweta akara pụtara mgbu afọ nke 3 opekata mpe n'arọ ka afọ iri na opekata mpee afọ atọ na -ezu oke izu kwa izu ọgwụgwọ ahụ. oge.
Ka ọ na-erule ngwụsị oge ọgwụgwọ ahụ, ndị ọrịa nọ na usoro ọgwụgwọ linzess nwere ahụmịhe BIS mara mma karịa ka ha na-elebanye anya na ndị nnọchianya isi ha na usoro
Mgbanye bowel na-agagharị ugboro ugboro
Stool agbanwe agbanwe
Ogologo oge na mbọ anụ ahụ mmadụ na-eji agafe.
Ahụ mgbu mgbu
Nke ahụ gosipụtara na Linaclotide gosipụtara dị ka ọgwụgwọ dị mma maka BIS.
Linaclotide maka Ọrịa Ala Idiopathic Constipation (CIC)
N'ime omumu iji chọpụta arụmọrụ nke Linzess maka CIC njikwa njikwa, ndị okenye okenye nwere ọrịa afọ ọsịsa idiopathic ka etinyere na ọnwụnwa, nnwale ụlọ ọgwụ dị iche iche, nke yiri ọmụmụ BIS akọwapụtara n’elu.
Onye ọ bụla n'ime ndị ọrịa ahụ ezutela usoro Rome II arụ ọrụ arụmọrụ ma gbanwee 72mg, 145 mcg Linzess, 290 mcg Linzess ma ọ bụ ọgwụgwọ placebo kwa ụbọchị n'oge oge izu 12.
Na ngwụsị oge usoro ọgwụgwọ ahụ, ndị ọrụ nyocha ahụ mere ka enwekwu ọhụụ mgbaàmà CIC n'etiti ndị ọrịa nọ na ọgwụgwọ Linzess dịka e jiri ya tụnyere ndị nọ na placebo. Nke kachasị, ha enwegogogo ọkwa dị elu n'ihe gbasara ọnụnọ stool, anọgidesi ọnụnọ na nsogbu eriri afọ.
N'ime usoro ọgwụ Linzess atọ ahụ, nwere obere mmetụta dị na mgbakwunye na ịnye nnukwu mgbaàmà CIC. Nke a gosipụtara ihe ngosi Linaclotide nke ikike ya ịgwọ CIC.
N'adịghị ka ọgwụ ụfọdụ eji eme ihe maka ahụike ndị a kpọtụrụ aha, usoro Linaclotide dị iche- ọ naghị etinye ahụ gị n'ahụ. Usoro Linaclotide na-ewere ọnọdụ nanị na eriri afọ gị site na ịba ụba nke mmiri, na-eme ka ahụ mmadụ na -ekwughari afọ ma na-ebelata ihe mgbu nke nwere ike isi na nsogbu bowel pụta.
Linaclotide (Linzess) na-eme ka eriri afọ na -emepụta mmiri karịa site na ịba ụba mmepụta nke cyclic guanosine monophosphate.
Mgbe Linaclotide jiri ike ya mee ka mmiri dị n’eriri na-abawanye, nri na-aga n’ihu ngwa ngwa ma udiri ala na-adị mma. Nke a na –eme ka ihe mgbaàmà nke mgbaàmà ndị na - emetụta ụbụrụ dị ka ụkwara nta, afọ mgbu / afọ mgbu na mmetụta afọ na-ezughị ezu.
Mgbe ị mere Linaclotide zụrụN'ezie, iji ọgwụ dọkịta depụtara ya, ọ dị mkpa ijide n'aka na ị gụrụ ntuziaka ọgwụ ọ ga-enye gị nke onye na-ere ọgwụ tupu ị theụọ ọgwụ ahụ. Ntụziaka ahụ ga-agwa gị usoro kwesịrị ekwesị Liaclotide maka gị, oge usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị yana oge usoro ọgwụgwọ akwadoro.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwa ọ bụla Liaclotide dose, egbula oge ịkpọtụrụ dọkịta gị ma ọ bụ onye na-ere ọgwụ iji zere nsonaazụ Linaclotide ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta Linaclotide.
N'ịbụ onye na-a oụ ọgwụ, Liaclotide kwesịrị iji ọnụ. Youkwesiri ịhapụ ya mgbe afọ na-efu, ọkacha mma nkeji 30 tupu iwee nri mbụ gị n’ụbọchị. Ọgwụ ikpeazụ Linaclotide dị n'ụdị capsule ma ekwesịrị ilo ya kpamkpam. Shouldkwesighi ịkụji ma ọ bụ Ire Linaclotide capsules.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwara irichapụ capsules mana n'efu, ị nwere ike mepee ha ma gwakọta ihe ndị dị na spoonful. Ghazie ngwakọta ahụ ozugbo ọ dịkwa ka ọ dị — anaghị ata ya ata. Gwakọta naanị ego ole ị kwesịrị iwere n'oge ahụ n'ihi na ịchekwa ngwakọta ahụ ga-eme ka ọgwụ ghara ịdị irè.
Bụrụ na ịnweghị ntụ osisi apụl, ịnwere ike iji mmiri dịka ihe ọzọ. Tụọ otu ounce ma ọ bụ 30mm mmiri, mepee capsules nke Linaclotide edepụtara ma tọpu ọdịnaya nke mmiri. Ghaa mmiri-Linaclotide ihe dị ka sekọnd 20 wee itụọ ya ozugbo. Dị ka ọ dị na ngwakọta apụl apụl, erikwala afọ ojuju.
Ọ bụrụ na ebido ị theụ ọgwụ ahụ site na ọkpọkọ nasogastric ma ọ bụ eriri afọ, chọọ nduzi na nchịkwa site n'aka onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị. Agbanyeghị, lee usoro izugbe maka nchịkwa tube.
Tụọ 30 ml nke mmiri dị ọcha ma na-ekpo ọkụ ma tinye ya n’ime akpa dị ọcha.
Mepee Capacil Linaclotide ma tọgbọ ọdịnaya ya dum (chaplet) n'ime mmiri
N'etiti mmiri ahụ na chaplet Linaclotide site na ịghagharị ngwakọta ahụ nwayọ maka ihe na-erughị sekọnd 20.
Dọta mmiri mmiri Linaclotide n'ime mpekere ziri ezi nke nwere ọnụ yiri nke catheter na nha kwesịrị ya. Mgbe ahụ kesaa ngwakọta ahụ n'ime nasogastric ma ọ bụ eriri afọ nke onye ọrịa na-eji site na itinye nrụgide na-agbanwe agbanwe ma ọ dị ngwa ngwa nke ihe dị ka sekọnd 10 mL / 10 na sirinji..
N'ebe enwere ụfọdụ bekee Linaclotide nke nọgidere n'ime akpa ahụ, gbakwunye 30ml nke mmiri dị ọcha, gbanye ngwakọta ahụ, ma chịkwaa ya dịka esi kọwaa ya na mbụ.
Ozugbo emere gị iji duzie ngwakọta nke mpempe akwụkwọ Linaclotide na mmiri, jiri mmiri 10 ml dịkarịa ala na-agbanye ọkụ nchịkwa.
5. Kedu ihe bụ usoro ọgwụgwọ nke Linaclotide (Linzess)?
Otito Linaclotide kwesiri ekwesi si n’otu onye n’enwe onye ozo, dabere n’otutu o zubere ịgwọ ya na otu esi emeghachi omume na ogwu. Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịmara na ndị na-enwetabeghị afọ 18 agaghị eji ọgwụ ahụ mee ihe.
Kidsmụaka dị obere nọ n'ihe egwu dị elu nke ịkpa oke Ihe mmetụta Linaclotide ha kwesiri iji ogwu.
(1) Oge Ọkachasị Okenye Nke Ọrịa Maka Ahụhụ Ọrịa
Maka okenye nke na-arịa ọrịa Irritable Bowel Syndrome, nke afọ mgbu na - esochi ya, o kwesịrị ị aụ ọgwụ Liaclotide nke 290 mcg kwa ụbọchị. Dịka e kwuru na mbụ, ekwesịrị ị theụ ọgwụ ahụ na afọ efu. Iji hụ nke ahụ, were ya tupu nri mbụ gị n’ụbọchị.
(2) Oge Ọkachasị Onye Ọkachasị Ahụ Maka Nsogbu
Dabere na Nchịkwa Ọgwụ na Ọgwụ US, ọgwụ Linaclotide a tụrụ aro maka onye toro eto na-arịa ọrịa idiopathic na-adịghị ala ala (CIC) bụ 72 mcg.
Agbanyeghị, enwere ike ịkwado ntụtụ 145 mcg maka onye ọrịa nwere okenye na CIC, dabere na ngosipụta ya na nnabata ya. Can nwere ike ndenye ọpụpụ linzess 72 mcg nyocha iji nweta echiche banyere etu ogwu si arụ ọrụ yana ndị ọrụ eritela uru na ya.
Dabere na nyocha linzess 72 mcg dị iche iche, n'etiti nzaghachi ndị ọzọ banyere ọgwụ, onye ọrịa nwere nsogbu ahụike ndị a kpọtụrụ aha ma na-ele anya irite uru site na ikike ya kwesịrị iji ya mgbe niile iji rụpụta nsonaazụ achọrọ. Ọzọkwa, a ga-ewere ya otu oge kwa ụbọchị oge niile usoro ọgwụgwọ usoro iwu ọgwụ.
Ọ dị mkpa ịmara na o nwere ike ịbụ na Linzess nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta nke Linaclotide na ọgwụ dị iche iche. N'ihi ya, ịkwesịrị ịkọwa dọkịta gị banyere ọgwụ ọ bụla ị dị ugbu a tupu ịmalite iji ya (Linaclotide).
Ọzọkwa, ụmụ nwanyị dị ime kwesịrị ịkpachara anya mgbe ha na-atụle ị Linụ Linaclotide n'ihi na ọgwụ ahụ nwere ike ibute nnukwu nwa ebu n'afọ. Ha kwesiri ịchọ nlebara anya nke dọkịta iji gosi na nchekwa ha yana nke ụmụ amụrụ ọhụrụ ha kwesịrị ị theụ ọgwụ. Otu ikpe a metụtara ndị nne na-enye nwa na ndị ị bu n’obi ịtụrụ ime ka ha na-a theụ ọgwụ.
Agbanyeghị, ọbụlagodi na ha nwere CIC ma ọ bụ Irritable Bowel Syndrome, ndị ọrịa na-erubeghị afọ 6 afọ ekwesịghị iwere. Linzess ntụ ntụ (851199-59-2). Nnyocha nyocha nke ụlọ ọgwụ chọpụtara na ọgwụ ahụ kpatara ọnwụ nke ụmụ oke ụmụaka na afọ nke hà ka nke afọ 6 na mmadụ.
N'ihi ya, a na-enye ọgwụ ahụ maka ndị ọrịa na-erughi afọ n'ihi na ọ na-etinye ha n'ihe ize ndụ nke ibute ọrịa afọ ọsịsa na oke ihe ojoo ya.
Na mgbakwunye, enwere data nyocha nke na-egosi nchekwa na arụmọrụ nke linzess n'etiti ndị ọrịa dị afọ 6 ruo afọ 17. Dị ka nke a, n'ihe banyere nwatakịrị ma ọ bụ onye na-eto eto nọ n'okpuru 18 afọ chọrọ enyemaka nke ICI ma ọ bụ BIS, a ga-ebu ụzọ chọọ ndụmọdụ dọkịta.
Might nwere ike iwe ihe ruru izu abụọ tupu ị nweta ahụ efe mgbaaka n'ihi ọgwụ. Yabụ, nwee obere ndidi na ya. Nọgide na-eji ya dịka enyere gị aka.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na mgbaaka gị anaghị aka ọfụma ma ọ bụ jọọ njọ ọbụna mgbe ị na-ejikwa linzess, a takeụghị ọgwụ karịrị etu ekwuru. Ikwesighi ime nke ahụ n'ọnọdụ ọ bụla. Kama, gwa dọkịta gị ka ọ chọpụta ihe kpatara ọrịa ahụ enweghị ọgwụ yana ndụmọdụ gbasara ihe ọzọ aga - eme.
Ọ dị mma izere iji Linaclotide ma ọ bụrụ na ị nwere ihe nfụkasị ahụ ma ọ bụ na eriri afọ gị nwere ihe mgbochi.
Ọ bụrụ na ị na-atụfuru ọgwụ Liaclotide, anwala imeju ego maka ọgwụ echefuru. Chefuo banyere ya ma gaa n’ihu were usoro ị ga -emechi nke ọma n’oge ezubere.
Bụrụ na gị ma ọ bụ onye ị hụrụ n'anya takesụrụ ọgwụ Liaclotide (ị doụbiga ya ókè), aga-elebara dọkịta ahụ anya ozugbo. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịkpọtụrụ ọrụ enyemaka Poison site na ịpị 1-800-222-1222.
Dabere na iche iche Nyocha Linaclotide na ọmụmụ sayensị, ihe ndị a bụ ihe ndị ọzọ a na-ahụkarị maka Liaclotide:
Mpepu afọ ma ọ bụ ahụ erughị ala
Oria na aruma dika udiri imi / imi, akpiri na-egbu mgbu imi ma obu imi
imi ma ọ bụ imi imi
ọbara ọgbụgba nke akụkụ anọ
Ọ bụ ezie na adịkarịghị, ị nwekwara ike ịnweta otu n'ime mmetụta ndị ọzọ Linaclotide:
Ọrịa shuga siri ike ma ọ bụ na-adịgide
Ọrịa shuga nke na-esonyere anya ilu ma ọ bụ mmetụta nke na-eme ka ọ dị gị ka ọ nwere ike ị gafere
Mmetụta enweghị nchekasị
Thirstba ụba na mmiri na-adịgide
Obi na-efe efe
Ike adịghị ike
Oké afọ mgbu
nwa, ọbara, ma ọ bụ fery fery
iku ume siri ike
ihu, egbugbere ọnụ, ire, ma ọ bụ ọzịza azụ
Kwesịrị ịchọ enyemaka mberede ma ọ bụrụ na ị na-enwe ọzịza n'akụkụ akụkụ ndị a kpọtụrụ aha, nsogbu iku ume ma ọ bụ hives.
N'ihe banyere mmetụta ọzọ Linaclotide na-adịghị ahụkebe, ị ga-akwụsị ị useụ ọgwụ ahụ ma kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo maka nduzi ọzọ.
Mmekorita nke Linaclotide nwere ike ịdapụta bụrụ na ejiri Linaclotide na ọgwụ ndị ọzọ gụnyere ọgwụ ndị ọzọ, ihe ndị na-enye vitamin, ọgwụ na ọgwụ. Ufodu ogwu a gosiputara na o gha eme ka mmekorita nke Linaclotide gunyere:
Pdị ike Aspirin
Dulcolax (obere mmekọrịta)
Metamucil (obere mmekọrịta)
Levothyroxine (mmekọrịta na-agafeghị oke)
8. Kedu ihe dị iches n'etiti Linaclotide na lubiprostone?
ma Linaclotide na lubiprostone bụ DFA-mma ọgwụ maka adịghị ala ala idiopathic afọ ntachi na iwe bowel syndrome na ndị okenye. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmị elu afọ, ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla n’ime ha.
Agbanyeghị, ha nwere ọtụtụ ọdịiche n’ihe gbasara:
(1)Usoro ha dị iche iche
Lubiprostone so na klaasị ọgwụ a maara dị ka ndị na-eme mkpọchi chloride. N'aka nke ọzọ, Linaclotide (Linzess) bụ onye otu klaasị ọgwụ akpọrọ guanylate cyclase-C agonists.
Ọ bụ ezie na a ga-ewere ọgwụ Linaclotide a tụrụ aro otu ugboro n'ụbọchị, ọkachasị tupu nri ụtụtụ, a na-ewere Lubiprostone ugboro abụọ n'ụbọchị. Ya mere, ọ bụrụ na ịnwee nsogbu icheta ị takeụ ọgwụ gị kwa ụbọchị, Linaclotide ga-abụ nhọrọ ka mma maka gị.
Ihe ozo di iche di iche n’iche uzo ogwu ghari ka mmadu gha ewere otu mgbe. Dịka ọmụmaatụ, maka CIC, otu usoro Linaclotide tụrụ aro bụ 72 mcg ebe nke Lubiprostone bụ 8 mcg.
(3)Mkparịta ụka ọgwụ ọjọọ
Ihe ozo di iche Linaclotide ntụ (851199-59-2) na lubiprostone dị na mmekọrịta mmekọrịta ọgwụ. N'ihe banyere onye na-egbu ọgwụ 58 a maara na ya na Linaclotide na-emekọrịta ihe, mmekọrịta Linaclotide dị nnọọ ukwuu ma e jiri ya tụnyere lubiprostone nke metụtara naanị otu mmekọrịta ọgwụ.
Ekwadobere Linzess na 30th August 2012 ebe nnabata nke lubiprostone mere na Jenụwarị 31, 2006
Mgbe ị nwere nri n'ime afọ gị ma were Linaclotide, mgbaàmà nke eriri afọ gị dị ka afọ ọsịsa, afọ mgbu na gas nwere ike ịka njọ, n'ihi mmekọrịta Linaclotide-nri. Ọ bụrụ na ị mebie afọ ọsịsa siri ike karị ma ị na-a medicationụ ọgwụ ọzọ a na-aptionụ, a ga-etinye aka na nkwụsị nke ikpeazụ ahụ.
Iji belata nsị nke eriri afọ n'ihi mmekorita nri, ekwesịrị ịbanye Linaclotide na afọ efu.
N’aka nke ozo, enwere ihe omuma sayensi gosiputara na mmekorita nke nri nri Lubiprostone. Agbanyeghị, nke a agaghị ewepụ mmekorita ndị enwere ike ịme. Dị ka nke a, ọ dị mkpa ịchọ ịkọwapụta oge kachasị mma iji ọgwụ ahụ n'aka ndị na-ahụ maka ahụike gị
(6)Nsogbu nwa n’afọ na nne dị ime
Ruo ugbu a, ngalaba nke nyocha dị mkpa na nyocha Linaclotide na-egosi na o nwere ike ibute Lubiprostone na nwa ebu n'afọ ma nne dị ime were ọgwụ. N'aka nke ọzọ, enweghi otu nnyocha na-egosi na Linzess nwere ike ibute nsogbu nwa ebu n’afọ ma ọ bụrụ na nwanyị dị ime buru ya.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na nchekwa ae nwere site na usoro dị nta na-a .ụ ọgwụ. Agbanyeghị, enwere ike iwepụ ihe ize ndụ ahụ kpamkpam dịka a na-eme nyocha ugbu a iji chọpụta nchekwa ma ọ bụ ihe egwu nke ọgwụ ahụ nye nwa amụrụ.
Ya mere, ma ọ bu n’obi iwere Lubiprostone ma ọ bụ Linaclotide, nne dị ime kwesịrị ịgakwuru dibịa gbasara izi ezi nke mkpebi ahụ.
E wezụga CIC, lubiprostone nwere ike b
e jiri ya dịka ọgwụgwọ maka ọrịa afọ ntachi Opioid (OIC) yana ọrịa ọgbụgbọ na-arịa Irritable ụkwara afọ na ụmụ afọ ndị dịkarịa ala afọ 18.
N'ihe banyere Linaclotide, na-abụghị CIC, ọ na-agwọkwa ọrịa afọ mgbu na-esochi ụmụ afọ na ụmụ oke. Ejighi ya ọgwụgwọ maka OIC.
(8)Ọnụ ego Linaclotide
Mgbe ọ na-abịa Ọnụ ego Linaclotide, ọ dị elu karịa nke lubiprostone. N'oge a, ọnụ ahịa Linaclotide bụ ihe dị ka $ 450 maka agịga 30 mgbe capsules 60 nke lubiprostone nwere ike na-eri ihe dị ka $ 396. Agbanyeghị, ọnụ ahịa ndị ahụ na-agbanwe site na otu onye na-ere ya na onye ọzọ na site n'oge ruo n'oge.
Onye rụpụtara Linaclotide bụ ụlọ ọrụ akpọrọ Allergan ebe lubiprostone bụ ngwaahịa ụlọ ọrụ Sucampo.
N'agbanyeghị ọdịiche dị n'elu, ọ dị mkpa iburu n'uche na a na-ere lubiprostone na Linaclotide na ndị na-eri ihe n'ụdị ọgwụ capsule na ha enweghị mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ọzọkwa, ọgwụ abụọ chọrọ ndenye ọgwụ dọkịta iji nweta ha n'aka ndị ahịa ọ bụla.
9. Kedu ozi ndị ọzọ banyere Linaclotide m kwesiri ịma?
Dịka ọgwụ ọ bụla ọzọ, ntụ ntụ Linaclotide (851199-59-2) ma ọ bụ capsules kwesịrị ka a ga-echekwa nke eyen si apụghị igbochi ha iji ya mee ihe n'ụzọ. Ọzọkwa, ịbụ ọgwụ ọgwụ, ụfọdụ ndị nwere ike ịnwa ịkọrọ ndị ọzọ ọgwụ ahụ iji zere nsogbu nke ịga dọkịta maka ndenye ọgwụ.
Otú ọ dị, ịkekọrịta Linaclotide dị ize ndụ n'ihi na dọkịta aghaghị itinye ọtụtụ ihe tupu ịkọwapụta ọgwụ ahụ na ịgafe usoro ahụ nwere ike ịkpata nnukwu nsogbu.
N'ọnọdụ ịchọrọ ịzụta Linaclotide ịzụta, ịkwesịrị ịma na n'ọtụtụ mba, gụnyere US, ịchọrọ ọgwụ dọkịta iji nweta ọgwụ ahụ. Nke a bụ na agbanyeghị ma ịchọrọ ịzụta ya na ntanetị ma ọ bụ na ịzụ ahịa.
N'ihe banyere nchekwa, ọnọdụ nchekwa akwadoro maka Linaclotide 851199-59-2 bụ 25 Celsius C (77 Celsius F). Ma ị na-emeso Linaclotide ntụ ntụ ma ọ bụ capsules, a ga-echekwa ọgwụ ahụ na ebe mmiri na-enweghị mmiri na, ekwesighi ịkewa ma ọ bụ tinyeghachi ya. Kama, dobe ọgwụ niile n'ime akpa ya.
Ọzọkwa, hụ na akwachiri akpa ahụ mechie ya, ọ dị ezigbo njọ n'ime ya iji mee ka mmiri ghara ịbanye.
Ma ị chọrọ ịzụta Linaclotide 851199-59-2 maka iji ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Linaclotide maka ọrịre ma ọ bụ ihe ndị ọzọ eji Linaclotide mee, hụ na ị nwetara ya site na isi iyi nwere ntụkwasị obi. The online Linaclotide reviews nwere ike iduzi gị na ezigbo onye na-ere ahịa.
Ma ọ bụghị, na-enweghị ịrụsi ọrụ ike, na onye erere ịntanetị / n'ịntanetị na-ekwu na nwere ezigbo ya Linaclotide maka ọrịre nwere ike bụrụ nke a na-ere ire ere ma ọ bụ zuo ego ị tara ahụhụ.
Andresen, V., Camilleri, M., Busciglio, IA, Grudell, A., Burton, D., McKinzie, S.,… & Currie, MG (2007). Mmetụta nke 5 ụbọchị linaclotide na-agagharị na eriri afọ na-arụ ọrụ na ụmụ nwanyị nwere afọ ntachi-nke kachasị na-arịa ọrịa obi mgbaka. Gastroenterology, 133(3), 761-768.
Chey, WD, Lembo, AJ, Lavins, BJ, Shiff, SJ, Kurtz, CB, Currie, MG,… & Baird, MJ (2012). Linaclotide maka ọrịa obi na-ewe iwe na afọ ntachi: izu 26, izuzu, ihu abụọ, nyocha ebe a na-achịkwa placebo iji nyochaa nrụpụta ọrụ na nchekwa. Akwukwo ndi America banyere gastroenterology, 107(11), 1702.
Cuppoletti, J., Blikslager, AT, Chakrabarti, J., Nighot, PK, & Malinowska, DH (2012). Mmetụta dị iche iche nke linaclotide na lubiprostone na nkwụghachi nke ihe mgbochi mkpụrụ ndụ epithelial na cellular homeostasis mgbe ọ gbasara na nrụgide cell. Ọgwụ ọgwụ BMC, 12(1), 3.
Harris, A. (2013). LINACLOTIDE. ọkachamara.
Johnston, JM, Kurtz, CB, Drossman, DA, Lembo, AJ, Jeglinski, BI, MacDougall, JE,… & Currie, MG (2009). Pilot na-amụ banyere mmetụta nke linaclotide na ndị ọrịa nwere afọ ntachi na-adịghị ala ala. Akwukwo ndi America banyere gastroenterology, 104(1), 125.
Lembo, AJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Lavins, BJ, Currie, MG, Fitch, DA,… & Johnston, JM (2010). Mmetụta nke linaclotide maka ndị ọrịa nwere afọ ntachi na-adịghị ala ala. Gastroenterology, 138(3), 886-895.
Lembo, AJ, Schneier, HA, Shiff, SJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Jia, XD,… & Jeglinski, BI (2011). Ọnwụnwa abụọ enweghị usoro nke linaclotide maka afọ ntachi na-adịghị ala ala. New England Journal of Medicine, 365(6), 527-536.